Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 4 -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 4
Iingcaciso, imijelo yamanzi acocekileyo, iiplani, iindlela zokudibana. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswe kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu
Nguwo okwesine seti ye Izifundo ze-4 ebizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokuphatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokwakha. Yiba yingcali kwi-software kwaye uya kukwazi ukuvelisa umhlaba, ukubala izinto eziphathekayo kunye namaxabiso okwakha kunye nokudala uyilo olukhulu lweendlela, iibhuloho, i-sewers, phakathi kwabanye.
IZIQULATHO ZENKXASO-MALI YOKUGQIBELA (4 / 4)
-Ukuzenzekelayo kwezicwangciso zomgangatho.
-Ukubhalwa okuzenzekelayo kweenqwelomoya kwiprofayile.
-Ukuzalwa okuzenzekelayo kwezicwangciso zomgangatho-iprofayili.
-Ukubhalwa okuzenzekelayo kweenqwelwana zecandelo lomnqamlezo.
Inkcazo kunye noqwalaselo.
Ukutyibilika nokutshintsha kwethambeka.
IINJONGO- Ukwakhiwa kwendlela enqamlezileyo.
Uyilo lomsebenzi womgca ophakathi kweendlela
- Ukwenziwa komjikelo wokujikeleza okanye ukujikeleza.
Ukubalwa kweendawo neeparamitha
-Ianbacteres kunye ne-desenglobe
UKUQALWA KOKUSETYENZISWA KWEZOBUCHULE
- Uhlalutyo lwesiseko
Iidreyini kunye needreyini ezingaphantsi kwamanzi
UKUQHUTYELWA KWEEMPAWU ZESANIKI, NEEMPAWU
- Intelekelelo yento